घर अमेरिकी स्टेर्स मिगेल अल्मिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
मिगेल अल्मिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। SkySport र ThePlayersTribune मा क्रेडिट
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम संग ज्ञात "मिग्गी“। हाम्रो मिगेल अल्मिरोन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको मितिमा तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता प्रस्तुत गर्दछ।
मिगेल अलमिरोनको जीवन र उदय - क्रेडिट मध्यम,ThePlayersTribune र स्काईस्पोर्ट्स
हो, सबैलाई जीवनप्रति उसको नम्र मनोवृत्तिको बारे थाहा छ, कोही जो पिचमा उडेर चोट पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि, केवल केहिले मिगेल अल्मिरोनको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरु गरेर, उसको पूरा नामहरू मिगेल एन्जल अल्मिरन रेजाला हुन्। अलमिरोन फेब्रुअरी 10 मा 1994th दिन उनको आमा सोनिया अलमिरोन र बुवा, रूबेन अल्मिरोनको राजधानी अस्नुसीन, पराग्वेको शहरमा जन्म भएको थियो। तल सोनिया र रूबेन, उनको प्यारा आमा बुबाको फोटो छ।
मिगुएल अल्मिरोन अभिभावक- सोनिया र रुबेन अल्मिरोन
माइगुल अल्रमन थिएन एक धनी वा उच्च-वर्ग परिवार पृष्ठभूमिमा हुर्काएको। उसको परिवार असुन्सिनका सबैभन्दा गरिब मानिसजस्तो थियो जसले काम गरे तर उत्तम वित्तीय शिक्षा भने पाएनन् र प्रायजसो पैसाले स strugg्घर्ष गरे।
miguel अल्मिरिन आफैंमा एक गरीब परिवारमा हुर्किएको भेट्टाए, जसमा उनका बुबा रूबेनले सुरक्षा गार्डको रूपमा 18 घण्टाको पालोमा काम गर्थे र उनकी आमा सोनियाले सुपरमार्केट क्यासियरको रूपमा काम गरे। मिगुएल अलमिरोनका लगभग5भाईबहिनीहरू थिए। उसको परिवारका सबै सात सदस्यले एउटा सानो घर व्यवस्थापन गरे र सानो मिगेल आफैले आफ्नी आमासँग ओछ्यानमा साझेदारी गर्नुपर्‍यो।
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
शान्त र लजालु केटाहरूको लागि फुटबल लात चाँडो शुरू भयो। किनभने उसको बुबाआमा गरिब हुनुहुन्थ्यो, सानो मिगेल अल्मिरोनसँग त्यस्तो अवसर थिएन खेलौना को नयाँ संग्रह BUT मात्र एक पुरानो फुटबल बल जुन उनी दिनको धेरै चोटि लात हान्थे।
मिगेल अल्मिरोन सानो बालकको रूपमा। क्रेडिट: TPT
मिगुएल अल्मिरोन स्कुलेला बासिका प्राथमिक विद्यालयमा पढेका थिए जहाँ उनले फुटबलको सुन्दर खेल खेले। “मिगुएल एक धेरै शान्त विद्यार्थी थिए जसले आफ्नो गृहकार्य गरे। ऊ ती ती अल्छी बच्चाहरू मध्ये एक थिएन जो सँधै शरारती वा अचेत हुन्छ, "उनको पूर्व शिक्षक मारिया डेल पिलर Bernal खुलासा।
मिगेल अल्मिरोन एक 7-वर्ष पुरानो भए पछि, उनले यसलाई ठूलो बनाउने सपना देख्न थाले। उसको सब भन्दा ठूलो इच्छा थियो कि उसको परिवारले ठूलो घर किन्न पर्याप्त पैसाहरू थिए। प्रारम्भमा, उनले एक फुटबल क्यारियरको सम्भावनालाई देखे र उनले आफ्नो परिवारलाई गरीबीबाट बच्न मद्दत गरे। यो विश्वास छ कि उनले फुटबल गतिविधिहरुमा आफ्नो शक्ति र दृढ संकल्प देखेका थिए जुन सान पाब्लो ब्यारियो, असुनसियनको बस्तीमा वरिपरि प्याच-अप मैदानमा शुरू भयो।
सुक्खा हड्डी-कडा पिच जहाँ मिगुएल अल्मिरोनले फुटबल खेल्न सिक्यो। ThePlayersTribune मा क्रेडिट
सुक्खा, हड्डी-कडा पिच जहाँ मिगुएल आफ्नो dribbling कौशल honed उहाँलाई आफ्नो भाग्य निर्णय गर्न प्लेटफार्म दिए। अल्मिरोनका बुबा रुबेनले उनका छोरालाई उनका मित्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराउन आरामदायी क्षेत्रबाट टाढा राखेर समर्थन गरे।
"मिगुएल एकदम डरपोक थिए। उसको आत्मविश्वासको कमी थियो र सजिलै डराउन सक्छ। त्यसैले मैले उसलाई (क्लबमा) लगें त्यसैले ऊसँग अरू साथीहरू पनि थिए,"उनका बुबा रुबेन अलमिरोनले भने ESPN.
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
मिगुएल अल्मिरोनले चाँडै राम्रो गर्न थाले र धेरै साथीहरू बनाए जुन उनको घर नजिकै अवस्थित सुख्खा, हड्डी-कठोर पिच छोड्दै गरेको केही महिना भित्र भयो। यो नोभेम्बर3क्लब, एकेडेमी जसको वरिष्ठ टोलीले पराग्वे फुटबलको तेस्रो डिभिजनमा खेलेका थिए स्वीकार गरेमा समय लागेन। एकेडेमी एक ढु stone्गा थियो उसको प्राथमिक विद्यालयबाट टाढा।
उनीहरूको केटाको फुटबल खेल्ने इच्छा र यसबाट बाँच्नको आवश्यकतालाई बुझ्दै, परिवारका सबै सदस्यहरू लगायत आफन्तहरूले उनको चाहनालाई समर्थन गर्न यथासक्दो गरे। तल उसको सुरुको क्यारियर दिनको बाँकी स्मृति छ।
मिगेल अल्मिरोन फुटबलको साथ प्रारम्भिक जीवन - बाँकी सम्झनाहरू क्रेडिट सूर्य
मिगुएल अल्मिरोनका अभिभावकहरूले यो निश्चित गरे कि उनीहरूको छोरोले आफ्नो फूटबल प्रशिक्षण कहिल्यै गुमाउँदैन। उसको काका नामबाटडिएगो"र ग्रान्ड जो नामबाट जान्छ"Chelo"सबै अभ्यास गर्न उहाँसँगै बारी थियो।
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
अवसरहरू आए जब मिगेल अल्मिरोनले आफ्ना सीपहरूको साथ प्रगति गरिरहे। 14 को उमेरमा, मिगुएल नयाँ अवसरको लागि नोभेम्बर3क्लब छोड्न तयार थिए। पातलो किशोर को लागी आमन्त्रित गरियो क्लब Nacional, एक रेकर्ड ब्रेकिंग क्लब र को साथ परीक्षण पराग्वेको प्राइमरा डिभिजनको नौ पटकको चैम्पियनहरू.
दुर्भाग्यवश, उनी क्लबसँग ट्रायल असफल भए। भतिजाले आफ्नो सपना छोड्नु नपरोस् भनेर मिगेल अल्मरोनका काका डिएगोले आफ्नो हातमा लिने निर्णय गरे। डिएगोले उसलाई सेरो पोर्टेनोको साथ अर्को परीक्षण सुरक्षित गर्न मद्दत गरे। उनको शब्दहरु मा ...
"हामी उनलाई उसकी आमासँग ट्रायलमा लग्यौं जहाँ हामीले 300 केटाहरूलाई भेटेका थियौं जुन समान अवसरको लागि पर्खिरहेका छन्। म यो कहिले पनि भुल्दिन किनभने मिगुएल टीममा 301 नम्बर थियो"मिगुएल अल्मरोन काका डिएगोले भने।
मिगुएल आफ्नो क्षमताको लागि परीक्षण पास गर्दछ। जे होस्, यो अझै सीधा बाहिर अल्मिरोनको लागि बाहिर काम गरेन, जो टीमको अण्डर 15 र अन्डर 16 स्तरको लागि खेल्न असफल भयो। ऊ अत्यधिक हल्का भएको आरोप लगाइएको थियो, कोही व्यक्ति बढ्न सक्दैन।
अल्मिरोन एक पटक धेरै हल्का वजन को आरोप लगाइएको थियो। TpT
दुर्भाग्यवस नोभेम्बर 2010 मा, जब एकेडेमी खेलाडीहरू स्क्वाडबाट निकालिदैथिए, गरीब मिगेल ती नामहरूमध्ये थिए (सूचीमा) छोड्नु पर्ने थियो। मिगेल अल्मिरोन ड्रप गर्ने धम्की वर्ष 2011 जारी रह्यो उसको बढ्दो आशा नभए पनि। एक पटक जब उनी क्लबबाट रिहा हुने अवस्थामा पुगेका थिए, उनका पूर्व प्रशिक्षक हर्नान एकुना बाहिर आए र उनलाई छुटकारा दिए।
हर्नान एकुना एक पटक अल्मिरोनको पक्षमा उभिए। क्रेडिट-टिगोस्पोर्ट्स
"म संयोजक र प्रेसमा गएँ र उनीहरूलाई भनें: 'म क्लबले त्यो केटोलाई पछि नफस्न चाहेको छु किनभने ऊ पातलो थियो।"Acuna, 17 कोच अन्तर्गत क्लब भने।
हर्नान एकुना त्यो अभिभावक एन्जिल थिए जसले अल्ममिरनलाई आफ्नो पक्षको केन्द्रविन्दु बनाए र उनलाई प्लेमेकिंग कर्तव्यहरू सौंपा। उनी क्लबको पहिलो टीममा मिगुएल अल्मिरोन स्नातकको लागि जिम्मेवार थिए।
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
मिगेल अलमिरोनले बदलामा आफ्नो टीमलाई एक्सएनयूएमएक्समा पराग्वे क्लोसुरा ट्रफी र एक्सएनयूएमएक्समा क्लाउसुरा ट्रफी जितेर मद्दत गरे। अगस्त एक्सएनयूएमएक्समा, मिगुएल अल्मिरनले नयाँ संस्कृति र प्रशिक्षण विधिहरूको पर्दाफास गर्नुपर्ने महसुस गरे, त्यसैले आफ्नो देश छोड्ने निर्णय गरे।
अल्मिरोनले अर्जेन्टिना प्राइमरा डिभिजनमा क्लब एट्लिटिको लान्सका लागि हस्ताक्षर गरे। केवल एक सिजनमा, अल्मिरोनले क्लबलाई3ट्राफीहरू जित्न मद्दत गर्‍यो - कोपा बिकेनटेनारियो, सुपरकोपा अर्जेन्टिना र अर्जेन्टिना प्राइम्रा डिभिजन ट्राफी 2016 मा।
मिगुएल अल्मिरोनको क्लब एट्लिटिको लान्सेसमा ठूलो सफलता थियो। आईजी र पिकनो मा क्रेडिट
यी सबै हासिल गरिसकेपछि अल्मिरोनले त्यो देश अमेरिका छाडे जहाँ उनले एटलान्टा युनाइटेड एफसीको लागि हस्ताक्षर गरे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… सफलता संयुक्त राज्यमा पनि जारी छ। मिगेल अलमिरोनलाई मेजर लिग सोकरमा उसको दुवै सीजनको लागि एमएलएस बेस्ट इलेवनमा नाम दिइयो, साथै एमएनएस न्यूकमर अफ द इयरको लागि रेकर्ड 2017 को लागि। अमेरिकामा उसको सबैभन्दा ठूलो क्षण हो जब उसले आफ्नो टीमलाई 2018 मा MLS कप जित्न मद्दत गरे।
मिगेल अलमिरोन सफलताको ईतिहास - फेम कथामा उदय। आईजी लाई क्रेडिट
31 जनवरी 2019 मा, Almirón न्यू कैसल युनाइटेडमा क्लब-रेकर्ड शुल्कको लागि सामेल भयो जसले त्यसका लागि पिट्छ माइकल ओवेन। लेख्ने समयमा जस्तै ऊ इ he्ल्यान्डको उत्तर पूर्वमा जीवनमा बस्यो र न्यूकसलका मानिसहरु अन्ततः एक खेलाडी पाउँदा खुसी थिए जसको बारेमा उनीहरु उत्साहित हुन सक्छन्। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
प्रत्येक महान पुरुषको पछाडि एक महिला हुन्छ, त्यसैले यो भनिन्छ। र प्रायः सबै फुटबलरको पछाडि, एक आकर्षक पत्नी वा प्रेमिकाको सुन्दर व्यक्तिको रूपमा देखिएको छ अलेक्सिया नोटो जो मिगेल अल्मिरोनको प्रेम जीवनको पछाडि महिला हुन जान्छन्।
भव्य अलेक्सिया नोटो- मिगुएल अल्मिरोनको प्रेमिकालाई भेट्नुहोस्। आईजी लाई क्रेडिट
मिगेल अल्मिरोनको कालो-कपाल वाली राम्री प्रेमिका जुम्बामा राम्ररी तालिम पाएको छ। यो एक व्यायाम फिटनेस कार्यक्रम दक्षिण अमेरिका क्षेत्रमा धेरै लोकप्रिय छ। अलेक्सिया नोटोले आफ्नो मान्छेलाई अमेरिका र युरोपमा पुर्‍याउन अघि जीविका चलाउन यो काम गर्‍यो।
मिगेल अलमिरोनले नोभेम्बर 2016 को वरिपरि उनको प्रेमिकासँग गाँठो बाँध्यो, जुन वर्ष उनले आफ्नो वरिष्ठ क्यारियर सफलता शुरू गरे। यो वर्ष पनि उहाँ शरीर हुनुहुन्नथ्यो। तिनीहरूको विवाहको तस्वीरबाट न्याय गर्दा यो एउटा निजी समारोहजस्तो देखिन्थ्यो जहाँ केवल परिवारका सदस्यहरूलाई आमन्त्रित गरिएको थियो।
मिगुएल अल्मिरोन र एलेक्सिया नोटो वेडिंग फोटो
तिनीहरूले गाँठो बाँधे पछि, दुबै प्रेमीहरूले एक निजी र नाटकमुक्त विवाहको आनन्द उठाए। लेख्ने समयमा जस्तै, ती दम्पती हाल उत्तर पूर्वी इ England्ल्याण्डमा अलेक्सिया नोटोसँग जीवनमा बसोबास गरिरहेका छन् उनको मान्छे को लागी सबै भावनात्मक समर्थन प्रदान गरी तपाईं यसको मतलब Zumba क्यारियर होल्ड मा राख्नु।
मिगुएल अल्मिरोन र अलेक्सिया नोटो न्यू क्यासलमा जीवनको राम्रोसँग बसाई। आईजी लाई क्रेडिट
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
मिगेल अल्मिरोनको व्यक्तिगत जीवन फुटबलको पिचबाट टाढा जान्न तपाईंलाई पक्कै पनि उसको सम्पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
मिगेल अल्मिरोन व्यक्तिगत जीवनको बारे जान्ने। एमएसएनलाई क्रेडिट
सुरूवात गरेर, मिगेल अलमिरोन शीर्ष5फुटबलरहरू मध्ये एक हुन् जसले जीवनको लागि सबैभन्दा नम्र मनोवृत्ति राख्छ। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जो कहिले झगडामा पर्दैन र ऊ एकदमै आज्ञाकारी हुन्छ।
N'golo कांटे जस्तै, उहाँ जन्मनुभयो लजालु र शान्त हो, तर अर्कोतर्फ, विलक्षण र ऊर्जावान हुन सक्छ विशेष गरी पिचमा आफ्नो काम गर्दा। मिगुएल अल्मिरोन एक गहिरो चिन्तक र उच्च बौद्धिक व्यक्ति हो जसले हरेक अवसरमा आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्दछ।
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
मिगेल अलमिरोनले अन्ततः उनको विवाह भएको ब्यक्ति पनि 2015 मा अर्जेन्टिनाको लानसमा बसाएको समयमा आफ्ना आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूको लागि एउटा घर किन्ने वाचा पूरा गरे। ऊ हुर्किएको क्षेत्रमा नै घर किन्नुपर्‍यो, उसको बुबा, आमा, हजुरबा, हजुरआम, काका, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बस्ने कोठा बनाउन को लागी पर्याप्त थियो।
आज, उसको ठूलो पेचेकले परिवारका सबै सदस्यहरूको ख्याल राख्छ। मिगुएलले भाँडामा दिनको लागि धेरै खर्च गर्दछन् र प्रत्येक घर उनीहरूको लागि फुटबलले उनलाई लिने घरहरू दिन्छ।
मिगुएल अल्मिरोन परिवारका सदस्यहरू फोटोका लागि पोज गर्छन्। आईजी लाई क्रेडिट
आफ्नो आमा र बुबा को साथ, अल्मिरोन काका Deigo आफ्नो जीवन मा अर्को सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति हो। क्लब Nacional संग उनको विफल परीक्षण पछि डिएगो आफ्नो भतिजा डिप्रेसन मद्दतको लागि जिम्मेवार थियो।
मिगुएल अल्मिरनस काका- डिएगोलाई भेट्नुहोस्
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle
मिगुएल अल्मिरोन एक सुपर रिच फुटबलर हो जसको भुक्तानी चेक आवाज गर्दछ। एक पटक, उनले मेजर सकर लिग (MLS) ईतिहासको 12th सबैभन्दा बढी कमाएको खेलाडीको रेकर्ड राखेका थिए। एक पटक $ 209,000 प्रति गोल बनाउने र market9मिलियनको बजार मूल्य राख्ने कसैको लागि, यो आशा गरिएको छ कि उसले तलका अनुसार ग्लैमरस जीवनशैली बिताउनु पर्छ।
मिगेल अल्मिरोनको जीवनशैली बुझ्दै। क्रेडिट टेलीग्राफ
यो, तथापि, मामला छैन। मिगुएल अल्मिरोन एक नम्र जीवनशैली बिताउँछन् र आफ्नो पैसा प्रबन्ध गर्नमा स्मार्ट छ।
मिगेल अलमिरोन बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
सबै समयको उनको मनपर्ने खेलाडी सधैं गोलकीपर रहन्छ:
मिगुएल अल्मिरोनले एक पटक छिटो जवाफ दिए जब उनले सोधे कि उनी कुन फुटबलको सर्वाधिक फुटबलको इतिहासमा प्रशंसनीय थिए। उसको फुटबलको ज्ञानमा, त्यहाँ केवल एक मूर्ति छ। यो पौराणिक प्याराग्वाइन्स गोलकीपर बाहेक अरू कोही व्यक्ति छैन। चिलार्ट 1990 को बखत जो राष्ट्रिय टीमको मुख्य आधार थियो।
जोसे लुइस चिलावर - मिगुएल अल्मिरोनको आइडललाई भेट्नुहोस्। क्रेडिट FoxSports.
तपाईंलाई थाँहा थियो! चिलवर्ट इतिहासको एकमात्र गोलकीपर बनेका छन जसले अक्सर किक र पेनाल्टी लिने गर्थे, जुन उनी सबै समयका दोस्रो सर्वाधिक गोल गर्ने गोलकीपर बनेका थिए।
उनको CV कसरी लेखिएको समयमा जस्तो देखिन्छ: उसको व्यक्तिगत र क्लब सम्मानको संग्रहलाई हेरेर तपाईलाई सजिलै चिन्न सक्थ्यो किन न्यूक्सल यूनाइटेडले माइगेल ओवेनलाई मिगेल अलमिरोन किन्न प्रयोग गरेको भन्दा बढी शुल्क तिर्ने निर्णय गर्यो।
मिगुएल अल्मिरोन व्यक्तिगत र क्लब सम्मान
माथि देखाईएको अनुसार, मिगुएल अल्मिरोनसँग जहिले पनि प्रत्येक मौसममा 2016 बाट सुरू गरेर आफ्ना रोजगारदाताहरूलाई प्रस्ताव गर्न केहि चीज थियो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो पढ्नको लागि धन्यबाद माइगुल अल्रमन बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।